Intel Ukuzingela: Showdown Hack
Finyelela ekuzingeleni kwethu: Showdown Intel likaHack yilelo elaligqokwe-1 usuku futhi ubone ukuthi yini okufanele sinikele.
Uma uzizwa sengathi uzodinga isikhathi eside kakhulu ngenkathi ukopela, ungahlala uthenga ukhiye womkhiqizo wesonto elilodwa!
Sebenzisa iHunt yethu: Showdown Intel Hack inqobo nje uma ungathanda! Thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 namuhla.
Ukuzingela: Umbukiso uzokuvivinya (nabangane bakho uma kufanele!) Ngezindlela eziningi, ngoba akuwona amaqembu aphikisayo kuphela okufanele uwabheke. Khipha izilo zombili nabanye abadlali ngaphandle kokukhathazeka usebenzisa iHunt yethu: iHowdown hack!
Hunt: Showdown Intel Hack Imininingwane
Thola ukufinyelela kuzo zonke izici ezithandwa kakhulu ezitholakala ku-Hunt: Showdown Hack khona lapha ku-GamePron! Kuthuthukiswe ukusetshenziselwa imishini esekwe kwi-Intel, leli ithuluzi elisekela Windows 10 futhi liza ngesiNgisi kuphela. Yize i-HWID ikhiyiwe, iza ne-HWID Spoofer ukugwema ukuvinjelwa kwangaphambilini! Ifaka iHunt evelele: I-Showdown Aimbot, kanye nama-hacks amaningi abukwayo ngendlela ye-Item ne-Enemy ESP. Ngokubekwa Kwamathambo Phambili, Ukuqonda Okuhle, kanye ne-Adjustable FOV Circle, uthola ithuba lokwenza ngezifiso ngokuphelele isipiliyoni sakho sokugenca lapho usebenza neGamePron.
Ukuzingela kwethu: Umbukiso we-Intel Aimbot ikuvumela ukuthi ulungiselele ithuluzi ngezindlela eziningana, likuvumele wenze izindlela zakho zokukopela zibe ngeyakho. Isici se-ESP singahlungwa ukukhombisa izinto / abadlali abathile, okuvumela abasebenzisi be-GamePron ukuthi bafunde kabanzi ngokuqondiswe kwabo kalula.
Isitha ESP (Kulungiseka Kakhulu, Amathambo)
Imininingwane Yesitha (Ukuhlola ukufa, ibanga, amaGrunts, ama-Assassins, Izicabucabu, odeveli bamanzi, ama-Meatheads, ama-Immolators, ama-Leeches, ama-Hell hound, ama-Butchers)
Into ESP (okulungisekayo kakhulu, izicupho zebhere, izinkomba, amabhokisi okunikezela (ammo, ezempilo, izinto), izikhali ze-melee, izikhali eziphonswayo (amalambu njll.), Izinto eziqhumayo , ikesi lezikhali, abakhangayo, uwoyela, amaphuzu wokukhishwa.)
I-Aimbot enhle kakhulu
I-FOV eguquguqukayo ne-humanized smoothing
Ukulungiselelwa kwe-aimkey amaningi
I-aimbot yegundane elingisiwe yehadiwe (iphephe kakhulu!)
Isebenza kuzo zonke izinhlamvu nama-NPC!
Akukho Ukusabalala (ngesilayida sephesenti)
Mayelana nokuzingela: Showdown Intel
I-GamePron izobhekela abasebenzisi bethu lapho kungenzeka khona, ngoba lokho ukuphela kwenhloso noma yimuphi unjiniyela ofanelekile ongaba nayo. Senze isiqiniseko sokuthi le nkohliso kulula ukuyisebenzisa, noma ngabe kubalulekile ukukhumbula ukuthi lokhu kuphamba kungaphakathi. Ungaqhubeka nokusakaza ngenkathi usebenzisa le nkohliso, njengoba sinikeza inketho yeStreamproof ekuvumela ukuthi usebenzise ithuluzi lethu ngaphandle kokwazisa ababukeli bakho ukuthi uyakopela! Ithuluzi elifanele ukugcina abalandeli bakho bethokozile, futhi futhi lihle uma ufuna ukuwina imidlalo embalwa kunokujwayelekile.
Kungani usebenzise iHunt: Showdown Intel ngaphezu kwabanye abahlinzeki?
Isizathu sokuthi ungathanda leli thuluzi ngaphezu kwabanye silula, ngoba linikeza okuningi kakhulu uma kukhulunywa ngekhwalithi eseduze. Cishe ujwayele ukusebenzisa amathuluzi we-lackluster angenazo izinto eziningi ongasebenza nazo, kepha lokho akuyona inkinga nge-GamePron. Iqiniso lokuthi usebenzisa umshini osuselwa ku-Intel futhi lisho ukuthi uzodinga okuhambisanayo, futhi ngokubonga ukuthi uwutholile. Akugcini lapho, kepha ukwesekwa kwamakhasimende ethu akunakuqhathaniswa! I-HWID Spoofer ifakiwe nethuluzi futhi, ngakho-ke asikho isidingo sokukhathazeka nganoma yikuphi ukuvinjelwa oye wakuthola esikhathini esedlule ngeGamePron!
Ngaphandle kwemenyu efanelekile yomdlalo, akukho okuningi ongakwenza uma kukhulunywa ngokukopela. Udinga ukwenza ukulungisa endizeni ezimweni eziningi, yingakho imenyu yethu yomdlalo iyisici esibalulekile okufanele usicabangele. Ngaphandle kwakho, ubungeke ukwazi ukwenza izinguquko ezidingekayo ukukubeka ethubeni lokuwina. Akudingeki ukuthi ulayishe nje iHunt: Showdown Intel Hack bese uthandazela ukuthi izilungiselelo zesisekelo zizokusebenzela! Ngokusebenzisa i-GamePron ungene ezweni lokuphamba okusha (futhi okusebenzayo) kuyo yonke imidlalo oyithandayo, kungakhathalekile ukuthi ukhohlise isikhathi esingakanani.
Yize kunezindlela zokucija amakhono akho ngokwemvelo, ukusebenzisa i-Intel Hunt: I-Showdown iyindlela elula ongayibheka uma kukhulunywa ngokuwina njengamanje. Akusamele uqhudelane nabanye abadlali, njengoba uma usunike amandla leli thuluzi, umdlalo usuphelile.
Ilungele Yengamela nge Hunt yethu: Showdown Intel Hack?